That's so good, right?: In The Bleachers
မလွတ်မလပ် လူသိပ်မရှင်းသော public area မှာ တစ်ကိုယ်ရေအာသာဖြေတဲ့ ပထမဦးဆုံးအတွေ့အကြုံကို ကျွန်တော် ရှင်းရှင်း လင်းလင်းကြီး ကိုမှတ်မိပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆို လောလောလတ်လတ် မနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကိုးဗျ။ အရင်တုန်းက ဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှကို မလုပ်ခဲ့ဖူးတာ။ အခုလို မလုပ်မိခင်ကဆိုပါတော့။ အနာဂတ်ကဘာတွေ ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်မယ်ဆိုတာတစ်ယောက်မှမသိနိုင်ဘူး တွေးကြည့်လေဗျာ။
ကျွန်တော့်အသက်၂၀မပြည့်ခင်အစောပိုင်းကာလတွေမှာ ဘောလုံးအားကစားကိုအရူးအမူးလုပ်ကြတဲ့ ကောလိပ်အသေးစားတစ်ခုကို တက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘောလုံးအားကစားကို နည်းစနစ်တကျသင်ပေးတာတွေ ပြိုင်ပွဲလေးတွေလုပ် လူငယ်ဘောလုံးသမားလေးတွေမွေး ထုတ်ပေးတာတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပါတော့လေ။ တကယ်တန်းတော့ ကျွန်တော်က ဘောလုံးအားကစားကို သိပ်စွဲလမ်း တတ် ၀ါသနာပါတတ်သူတစ်ယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ဒါပေမဲ့လဲဗျာ မိုးရာသီကုန်ဆုံးတော့မယ့်အချိန်ကာလလည်းဖြစ် စနေနေ့ည တွေဆို ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူး။ အပြင်ကိုထွက် လမ်းလျှောက် လတ်ဆတ်တဲ့လေတွေအားရပါးရ ရှူရှိုက်တာမျိုးလေးတွေပဲလုပ်ဖြစ်ပါ တယ်။ ဟီး…..အားကစားပွဲဝင်နွှဲတာထက် အားကစားမလုပ်ခင် သွေးပူအောင်လေ့ကျင့်ခန်း အသေးစားလေးတွေလုပ်ရတာကိုပိုနှစ်သက် မိပါရဲ့နော်။
အနောက်ပိုင်းမှာ ကောလိပ်စတက်ကတည်းက ဆောင်းဦးရာသီက ၀င်ချင်ချင်ဆိုတော့ နည်းနည်းလေးအေးသား။ ခုန်တက်ခုန်ဆင်း အားရပါးရအော်ဟစ်အားပေးတာတွေက သွေးကို ပူနွေးစီးဆင်းစေတယ်နော်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့ အနေနဲ့ အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် ဘောလုံးကစားတဲ့သူတော်တော်များများက တကယ့်ကို hot ကြတာပဲ။ သူတို့တွေကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော့်ကိုယ်အပူချိန်တွေ တိုးစေ တယ်ဗျ။ အပူချိန် ဒီဂရီနည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ်တော့ တိုးတယ်ဗျာ။ ဘောင်းဘီခပ်ကြပ်ကြပ်တွေဝတ်ထားတဲ့ သူတို့ပေါင်ခွဆုံတွေ မြင်နေ ရတာကြောင့် ကစားပွဲတိုင်း ကျွန်တော့်ညီဘွား မမာရတဲ့နေ့ကိုမရှိစဖူး။ ကစားပွဲပြီးတဲ့အချိန်တိုင်း အိပ်ဆောင်ကိုပြန် ကိုယ့်ဖာသာ ငပဲ ကိုကိုင်ပြီး လက်ကစားရတာအမော့ပေါ့။ အသင်းထဲမှာ အပြစ်ပေးခံရတဲ့ သို့မဟုတ် ကစားပွဲမှာ ပါဝင်ခွင့်မရတဲ့ အားကစားသမား တစ်ယောက် စိတ်ပျက်လက်ပျက် ပြန်လာဟန်ဆောင်ရင်း အဆောင်ကို အမြဲပြန်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီကိစ္စက ပုံမှန်လိုကိုဖြစ်နေပြီ။ အခန်းဖော်က ရက်သတ္တပါတ်အဆုံးသတ်ရက်တွေကျရင် သူ့ကောင်မလေးကို သွားသွားတွေ့တာဆိုတော့ ကျွန်တော့်အတွက် တော်တော် လွတ်လပ်တယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ကြိုက် -ွင်းထုပြီး သုက်ရည်တွေပန်းချင်သလောက် ပန်းချင်တဲ့နေရာပန်းပဲ။
တခြားကောလိပ်က ကျွန်တော်တို့နဲ့ တစ်နာရီစာလောက်ဝေးမယ်။ သူတို့နဲ့ အဓိကပြိုင်ဘက်အဖြစ် မျက်နှာခြင်းဆိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်း အရွေးခြယ်ခံရတဲ့အကြောင်းသိရတဲ့ အချိန်ကာလက မှတ်မှတ်ရရ လူတွေသွေးခဲသွားလောက်တဲ့ ညနေစောင်းကြီးပဲဗျာ။ ကျွန်တော်တက်နေခဲ့တဲ့ ကောလိပ်က သိပ်မကြီးဘူးလေ ပြောရရင် ဘောလုံးကွင်းခပ်ကြီးကြီးပါတဲ့ အားကစားရုံ တစ်ခုမရှိခဲ့ဘူးဆိုပါ တော့။ ဒါပေမဲ့ ဒီဒေသဘက်မှာ အားကစားနဲ့ပါက်သက်ပြီး ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့အထဲပါတယ်။ စတေးလက်စတီးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အမိုးမပါ သတ္ထုခုံတန်းတွေက ကွင်းကြီးရဲ့ ဘေးနှစ်ဖက်မှာ စီတန်းလို့ပါ။ ခုံတွေက သိပ်တော့မမြင့်ပေမယ့် တမျှော်တခေါ်ရှည်လျားပါတယ်။ ခုံတန်းတစ်ခုနှင့် တစ်ခုကြား နည်းနည်းလေးဝေးတော့ ခုံမှာထိုင်သူတွေရဲ့အောက်ပိုင်းကို ကြည့်မြင်နိုင်ပါရဲ့။ နည်းနည်းတော့ အမှောင်ရိပ် ကဲပါတယ်။
အင်း….ပြိုင်ပွဲကြီးနေ့မှာတော့ ကျွန်တော့်စိတ်တွေက တော်တော်ရှုပ်နေခဲ့တယ်။ လူတွေ အုပ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်နေတဲ့ ဒီကွင်းကြီးထဲက နေထွက်သွားချင်ပါရဲ့။ ဟိုသည်ကြည့်မိတော့ နားနေခန်းတွေဘက်နားက ခုံတန်းမှာထိုင်နေသူတစ်စုကို သတိထားမိသွားရပါရဲ့။ ဘယ်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ အဲ့နားမှာ မထိုင်တတ်ကြဘူး အားကစားပွဲဘယ်လောက်ကြီးကျယ်ကျယ်လေ။ ဘာကြောင့်ဆို ခုံတွေက ဟောင်းနေ ပြီ မသပ်မရပ်နဲ့ ပြီးတော့ ရှေ့ကမြင်ကွင်းတွေကိုလည်း သိပ်မရှင်းဘူးမြင်ရတာ။ ကွင်းကို ကာရံထားတဲ့ နံရံနှင့်လည်းနီးကပ်နေသေးတာ ပါ။ ပရိသတ်တွေကလည်း သိပ်မထိုင်၊ ကျောင်းကလည်း အခြေအနေသိပ်မဆိုးဘူးလို့ထင်သလားမသိ ဖယ်ရှားပြုပြင်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိပါ ဘူး။ နည်းနည်းမြင့်တဲ့ ခုံတန်းထိပ်မှာ ကျွန်တော်ထိုင်လိုက်ရင် ခဏနေကလူတွေကို ကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်။ သူတို့ကတော့ ကျွန်တော်နှင့်ခြားနားစွာ လူတွေမထိုင်တဲ့ မြင်ကွင်းတွေကနေ နည်းနည်းကွယ်နေတဲ့ ခုံတန်းမှာထိုင်နေကြတယ်ပေါ့နော်။ သူတို့ထိုင်နေ တဲ့နေရာက လူအများစုထိုင်နေတဲ့နေရာတွေကနေ ဖြတ်တောက်ထားသလားပဲ။ ဟဲ….ဟဲ ကျွန်တော်နှင့်တော့ ထောင့်ချိုးခပ်ကျကျမြင် ရသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ချောင်းကြည့်ရတဲ့ ဖီလင်မျိုးခံစားရသား။
ကျွန်တော်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်သွားသလားမသိဘူး လူရှင်းတဲ့ ခပ်မြင့်မြင့်နေရာကခုံတန်းမှာသွားထိုင်မိတာကိုး။ ကျွန်တော်ပြောပြနေတဲ့ စုံတွဲရဲ့ကစားပွဲကပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသဗျို့။ ရာသီဥတုကလည်း တော်တော်အေးတာ မတ်တပ်ရပ်ကြည့်ဖို့ကမဖြစ်။ ဒီတော့ ထိုင်ခုံမှာထိုင်ပြီး ကိုယ့်ဖာသာပြန်ထွေးပိုက်ရတော့တယ်။ ၀တ်ထားတဲ့ ခပ်ကြီးကြီးအနက်ရောင် trench coat နှင့်ထုပ်ပိုးထားသလိုမျိုး ဖြစ်အောင် ကိုယ့်လက်တွေကို ခပ်ကျစ်ကျစ်ပိုက်ထွေးထားရတာပေါ့နော်။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းတွေက လေအေးအေးတွေ ၀င်ထွက်နေတာကို အငွေ့တွေလိုမြင်နေရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘောလုံးအသင်းရဲ့ စတားဖြစ်တဲ့ ဘောလုံးသမားလေးကတော့ သူ့ဖာသာသွေးနွေးနေအောင် ကြိုးစားနေပုံကတစ်မျိုး။ တစ်ချက်တစ်ချက် သူခုန်လိုက်တိုင်း လှုပ်ရှားသွားတဲ့ ခပ်ဝိုင်းဝိုင်းတင်သားဆိုင် တွေဟာ အိကနဲ အိကနဲဆိုတော့ ကြည့်မြင်မိတဲ့ ကျွန်တော့်အဖို့ ၀တ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီခွဆုံကြီးဖောင်းလာတဲ့အထိ ဖြစ်မိရရော။ ကိုယ့်ဖာသာတွေးမိရတာက ဒီအချိန် ကျွန်တော်နေတဲ့ အဆောင်ပြန်သွားလိုက်လို့ကတော့ အားရပါးရ -ုဖြစ်ဦးမှာလို့။
ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလောက်ကစားပြီးချိန် ကျွန်တော်ခုံတန်းများအောက်နားက အသံတစ်သံထွက်လာတာကို သတိပြုမိတယ်။ အဲဒါ ခပ်တိုးတိုး လေချွန်သံ….. အချိန်းအချက်ပြုတဲ့အသံ။ ကျွန်တော် ပခုံးပေါ်ကနေ မသိမသာငဲ့စောင်းကြည့်လိုက်တော့ ဘောလုံးကစားသမားဝတ်စုံ ၀တ်ဆင်ထားကြတဲ့ ငနဲနှစ်ပွေကိုမြင်မိတယ်။ သူတို့ထဲက တစ်ယောက်က ကျွန်တော်တို့ကောလိပ်ကဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ယောက်က တော့ ပြိုင်ဘက်အသင်းကဘဲတစ်ပွေပဲဗျ။ ပထမတော့ သူတို့ဘော်ဒါကဏ္ဍခဏနားတုန်း စကားပြောနေကြတယ် အောက်မေ့မိတာ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့အသင်းကကောင်က တခြားလူရဲ့ ရင်အုပ်တွေကို ပွတ်သပ်ကြည့်နေတာကို သတိထားမိရတယ်။ ဟိုဘက် အသင်းကဘဲရဲ့လက်ကလည်း ကျွန်တော်တို့အသင်းက ငနဲရဲ့ပေါင်ခွဆုံရှိ အထုပ်ကြီးကိုကိုင်ထားတာပဲ။ ဘာတွေ….ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီ လဲမသိ ကျွန်တော်မြင်နေရတာတွေက။ ကျွန်တော့်အာရုံတွေ ဂရုထားမှုတွေအားလုံးက ကွင်းထဲက ကစားပွဲမှာ အာရုံမရှိတော့ ကျွန်တော် ထိုင်နေတဲ့ ခုံရဲ့ အောက်ဘက်နားက မြင်ကွင်းစီသာ အကုန်ရောက်သွားရပြီ။ အို…အို…သူတို့တွေ နှုတ်ခမ်းခြင်းစုပ်နမ်းကုန်ပြီ။ လျှာတွေ နဲ့တောင်သရပ်နေကြပြီလား တစ်ယောက်နှုတ်ခမ်းသားကို နောက်တစ်ယောက်ကပေါ့။
ကျွန်တော့်ကို သူတို့သတိမပြုမိ အသံတစ်သံမှ ကျွန်တော့်ဆီက မကြားသွားမိစေဖို့ကြိုးစားရင်း သူတို့နားရောက်အောင် ခပ်ပုန်းပုန်းကပ် သွားလိုက်တယ်။ ကျွန်တော် ဘဲတွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ သေချာတာပေါ့။ ဒါကိစ္စ လူတွေကိုအသပေးသိစေဖို့တော့ အသင့်မဖြစ်သေး ဘူးပေါ့ဗျာ။ ပြီးတော့ ဒီဘောလုံးသမားနှစ်ပွေ သူတို့အလုပ်များနေတုန်း ကျွန်တော့်ကို မမိသွားစေချင်တာတော့အသေအချာပါ။ ကျွန်တော့်မှာ ဖမ်းမိရင် အသတ်ခံရမယ့်အခြေအနေလိုမျိုးမှာရောက်နေရပြီ။ အကြောင်းပြချက်အချို့ကတော့ ရှိနေပါရဲ့။ သူတို့တွေ ကျွန်တော့်ကိုသတိမပြုမိကြဘူးထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆို ကျွန်တော်က တစ်ကိုယ်လုံးအနက်ဝတ်ထားတာကိုး။ ဒါကြောင့် သူတို့အမြင်မှာ ကိုယ်ပျောက်နေသလားမသိ။ ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နိုင်တာက တစ်စုံတစ်ယောက်က သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတာကိုခံရတဲ့ ရင်တဖိုဖို ခံစားမှုမျိုးကို ကြိုက်ကြသလားမသိ? ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ အတွန့်တက်စရာမရှိပါဘူး။ အခုလို Free show ကို ပိုက်ဆံမပေးဘဲကြည့်နေခွင့်ရတာ အမိုက်သားပဲဟာကိုနော်။
မှတ်မှတ်ထင်ထင်မြင်နေနိုင်ခဲ့တာက သူတို့နဲ့ မနီးမဝေးထောင့်ချိုးလေးမှာ မီးအလင်းရောင်တစ်ခုက ရှိနေတာလေ။ ဒီဘောလုံးသမား နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်က အခြားတစ်ယောက်ရဲ့ ဘောင်းဘီခါးကကြိုးကို လျော့ချလိုက်တယ်ဗျ။ Wow!! အဲဒီလူက Jockstrap တစ်ထည်ဝတ်ထားတာပဲ။ သူ့အထုပ်အထည်က ဖောင်းကြွနေတာများ ငပဲခေါင်းက မျှော့ကြိုးအစွန်းမှ တိုးထွက်နေတဲ့အထိပါ။ သွေး ကြောတွေက ဖောင်းကြွပြီး တထိတ်ထိတ်တိုးနေတဲ့ အဲ့ဒီလူငပဲဟာ အပြင်မှာ ကြာရှည်မနေရလိုက်ပါဘူး ဘောင်းဘီချွတ်ပေးနေတဲ့ လူရဲ့ ပါးစပ်ထဲ ‘ရှလွတ်’ ဆိုပြီးဝင်သွားတော့တာဗျ။ ကျွန်တော့်နှလုံးခုန်သံကို ကျွန်တော်ပြန်ကြားနိုင်တဲ့အထိ ရင်တွေခုန်လာရပါပြီ။ ကျွန်တော် က ခုံအမြင့်မှာထိုင်နေတာ သူတို့က အောက်ဖက် မလှမ်းမကမ်းနီးနီးကပ်ကပ်မှာ လှုပ်ရှားနေကြတာဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်။ ကျွန်တော့် ကိုယ်ပိုင်ငပဲဟာလည်း မာသထက်မာလာပြီး ဘောင်းဘီထဲကဖောက်ထွက်မတတ်ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီငနဲနှစ်ပွေလှုပ်ရှားနေကြ တုန်း ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်ငပဲကို ကိုယ်ကိုင်ကာ လက်ကစားချင်ခဲ့ပါရော့။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောနေတာထက် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ဖို့က ပိုလွယ်တဲ့အခြေအနေပါ။ ကစားပွဲတစ်ခုကိုမြင်ရကြည့်နေရတဲ့ အခြေ အနေကနေ ကျွန်တော် ထထွက်သွားဖို့တော်တော်ခက်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်ထွက်ခွာမသွားနိုင်ခဲ့ပါ။ ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ညီဘွား ကလည်း တိုက်တစ်လုံးအခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားသလို ခိုင်မာတောင့်တင်းလွန်းပါပြီလေ။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော် သူတို့ရဲ့ မာန်ဟုန်ပြင်းတဲ့ လှိုင်းလုံးအောက်က ရုန်းထွက်ပြီး ကိုယ့်အာသီသကိုယ် ဖြေဖျောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ပိန်ပိန်ပါးပါး ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး ၀တ်ထားတဲ့ အားကစားကုတ်အင်္ကျီကလည်း ခပ်ကြီးကြီးဆိုတော့ မသိမသာလက်ကစားတဲ့ကိစ္စက ရယ်စရာတော့ မဖြစ်လောက်ပါဘူး။ ၀တ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီရဲ့ဇစ်ကို ခပ်ဖြေးဖြေးလေးဆွဲဖွင့်ပြီး ကျွန်တော့်ငပဲကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲ အရေပြားကတော့ အေးစက်နေပြီး အတွင်းသားကတော့ မီးတောက်နေတာပဲဗျာ။ ကျွန်တော့်ငပဲကို လက်ကလေးနဲ့အသာအယာ ပွတ်သပ်ပြီးနောက် ခပ်မှန်မှန်လေး-ုလိုက်ကာ မျက်လုံးတွေကတော့ အောက်နားက ဘဲနှစ်ပွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို အားရပါးရခံစား ပွဲကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲက အထိအခိုက် သိပ်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လုံး ဘာမှ မလုပ်မကိုင်ဖြစ်ခဲ့တာကိုး။ တစ်ချက် တစ်ချက် လက်ကို အထက်အောက် ပွတ်သပ် ကစားလိုက်တိုင်း ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး တွန့်တွန့် တက်သွားမိတဲ့အထိ ခံစားချက်တွေက တသိမ့်သိမ့်ဖြစ်ရပါတယ်။ Wow Wow! ကျွန်တော်တို့အသင်းက ဘောလုံးကစားသမားက ဟိုလူ့ ငပဲကို သူ့လည်မျိုထဲရောက်တဲ့အထိ သွင်းချလိုက်တယ်။ စုပ်မှုတ်ရာကထွက်တဲ့အသံတွေရယ် ဖီလင်မြင့်လို့ ညည်းညူလိုက်တဲ့ တရှီးရှီး သံတွေကို အေးစက်စက်လေလှိုင်းတွေကြားကပဲ ကျွန်တော်ကြားနေရသား။ ဒူးထောက်ပြီး ကီးနေတဲ့ ငနဲက သူ့လက်ချောင်း နှစ်ချောင်း သုံးချောင်းကလေးတွေနှင့် သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့ ခရေ၀တွေထဲ ဖြေးဖြေးခြင်း ဖိသွင်းဖိထုတ်ကစားတာကို တစ်ပြိုင်တည်းလိုလုပ်တယ်။ အင်း….ဟင်း……သူတို့လှုပ်ရှားနေတာကြည့်ရင်း ကျွန်တော့်ငပဲရဲ့ ပန်းနုရောင်ထိပ်သားတွေကို လက်ဖ၀ါးသားနုနုလေးတွေနဲ့ ပွတ်သပ် ကြည့်ရတာ ဖီးလ်ပါပဲ။ အရည်ကြည်လေးတွေတောင် စို့ထွက်စပြုလာပြီ။ အို….အို….ဟိုဘက်အသင်းလူက နံရံဘက်ကို မျက်နှာမူပြီး ခပ်ကုန်းကုန်းလုပ်နေကာ ကျွန်တော်တို့အသင်းကဘဲက လျှာအရှည်ကြီးထုတ်ကာ အဲဒီ့သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့ ကုန်းနေတဲ့လူရဲ့ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကိုဖြဲကာ မုန်တိုင်းမွှေနေရော။ အား..အ..shit!! ရေခဲမုန့်ကိုလျှာနဲ့လျက်နေသလိုပဲ စိတ်ရှည်လက်ရှည် အားရပါးရလျက် နေတာ ကျွန်တော်တောင် ကြက်သီးထပြီး ကျောထဲက ခပ်တွန့်တွန့်ဖြစ်မိသေး။ ခရေ၀တလျောက်ကိုလျက်ပြုနေတာက lube သိပ်ထည့်စရာမလိုလောက်တော့ဘူး။
ခဏကြာတော့ ခရေ၀က နည်းနည်း loose ဖြစ်ပြီထင်တယ်။ လျက်ပြုနေတဲ့ငနဲက သူ့လက်ဖ၀ါးထဲ တံတွေးခပ်ပျစ်ပျစ်ကိုထွေးထည့် သူ့ငပဲသူကိုင် ပွတ်သပ်ကာ ငပဲထိပ်နဲ့ တခြားတစ်ယောက်ရဲ့ ခရေ၀ကို အထုတ်အသွင်းကလိပါ့။ နှစ်မိနစ် သုံးမိနစ်လောက်ကြာတော့ ရှေ့ကလူက doggie-style အနေအထားအတိုင်း ကုန်းချလိုက်တော့ နောက်ကချတဲ့လူက အလိုက်သင့်ပုံစံပြောင်းပြီး လှုပ်ရှားရော။ “အား…အ….ကျွတ်ကျွတ်….ဖြေးဖြေး” သူတို့နှုတ်ဖျားက ညည်းညူသံတွေရော ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုတွေကရော ကြားရတဲ့အသံတွေက အားရပါးရရှိလှပါတယ်။ ကျွန်တော့်နှလုံးခုန်သံတွေ ပိုမိုပြင်းထန်လာရသလို အသက်ရှူသံတွေဟာလည်း ထို့အတူပေါ့နော်။ ကျွန်တော့်ငပဲ ကို လက်နှင့်အားရပါးရကိုင် တစ်ချက် တစ်ချက် ကစားလိုက်တိုင်း တင်သားဆိုင်တွေကိုကျစ်ကျစ်လိုက်မိတဲ့အထိ ဖြစ်မိရပါတယ်။ သူတို့ သူတို့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းကိုလုပ်ကိုင်နေကြတာပါ။ တစ်စက္ကန့် နှစ်စက္ကန့်လောက်တောင် -ီးကိုအပြင်မှာ မထားဘူး ခရေ၀ထဲကို ပစ်ပစ်သွင်း တာများဗျာ။ ရှေ့က လေးဘက်ကုန်းနေတဲ့ငနဲရဲ့ ငပဲရှည်ရှည်ကြီးကလည်း လေထဲမှာ တန်းလန်းရမ်းနေတာ။ ရုတ်တရက် အဲ့လူရဲ့ငပဲက နေ သုက်ရည် ပွက်ကနဲကျလာတယ် ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို။ ပြီးတော့ သူ့တင်ပါးတွေကို ကျုံ့ကျုံ့ပြီး နောက်ကလူရဲ့ငပဲကို ညှစ်ညှစ်ပေးတာ တကယ့်ဆရာပဲ။ နောက်ကလူကလည်း အားကျမခံ bottရဲ့တင်ပါးတွေကို ဖြန်းဖြန်းနဲ့ ရိုက်ခတ်တာ နီစပ်လို့။ နောက်ဆုံး ခပ်ပြင်းပြင်း တစ်ချက်ဆောင့်သွင်းအပြီးမှာတော့ နောက်ကနေဆော်နေတဲ့လူရဲ့ နှုတ်ဖျားကခပ်တင်းတင်းအော်ညည်းသံနဲ့အတူ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာက တုန်ကနဲ တုန်ကနဲ ဖြစ်သွားကာ ရှေ့က ကုန်းနေတဲ့ သူ့ချစ်သူရဲ့ကျောပြင်ပေါ်မှောက်ချလိုက်တယ် ငပဲကိုမကျွတ်စေဘဲနဲ့။
ကျွန်တော်….ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်ငပဲသည်လည်း သုက်ရည်တွေပန်းထုတ်ဖို့ တာဆူနေပြီ အပြင်းအထန်။ တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက် အထက်အောက် ကစားအပြီးမှာတော့ Oh…my….God!! ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီအနားစတွေ၊ ကုတ်အင်္ကျီပေါ်တွေ အားရပါးရ သုက်ရည် တွေ ဖြန်းပစ်လိုက်မိတော့တယ်။ ကျွန်တော် ခုံနောက်မှီပေါ် နွမ်းလျစွာ မှီချပစ်လိုက်ပါတယ်။ ခဏနေတော့ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ ပြန်ပျော့ သွားတာကြောင့် ဘောင်းဘီထဲပြန်ဝှက်လိုက်ပါရဲ့။
ဘောလုံးကစားသမားနှစ်ယောက် အ၀တ်တွေပြန်ဝတ် ဘေးဘီလုံးဝမကြည့်ဘဲ ထွက်ခွာသွားကြတယ်။ ကျွန်တော် ခုံတစ်ခုမှာထိုင်နေတာ သူတို့ သိလား မသိလား သေချာမပြောနိုင်ဘူးဗျ။ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ဘယ်သူ့ကိုမှ လုံးဝဂရုမစိုက်တာလား။
အထက်ပါအဖြစ်အပျက်တွေကို တွေ့မြင်ခံစားခဲ့ရသော ညတစ်ညရဲ့နောက်မှာတော့ ကျွန်တော်ဟာ ဘောလုံးသမားတွေရဲ့ငပဲတွေကို ပိုမြင်ချင် ပိုဂရုစိုက်မိပါတော့တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့အသင်းအတွက် သောက်ရေလိုတိုင်း ယူပေးတတ်တဲ့ water boy တစ်ယောက် ဖြစ်ကရော။
ဘာကြောင့်ဆို ရေသန့်ဘူးတွေ သွားသွားယူဖို့ အ၀တ်လဲခန်းထဲ Locker room ထဲ ၀င်ရတာကိုး…ဟား ဟား။
Alex Aung (11 August 2013)
Note: လောလောဆယ် ဆယ်ကျော်သက်တွေကို အာရုံကျနေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံအသစ်လေးတွေကိုပဲ နှစ်ပုဒ်သုံးပုဒ်လောက် ရေးဖွဲ့ဖြစ်ဦးမယ်ထင်ပါတယ်။